६ वर्ष अघि पुष १४ का दिन मोरङको विराटचोकमा आयोजित एक कार्यक्रममा चक्रप्रसाद बाँस्तोला ढलेका थिए । त्यसपछि उनको होस कहिल्यै खुलेन । उनलाई उपचारका लागि भारत लगियो । विभिन्न डाक्टरलाई देखाइयो । होस खुलेन ।
निरन्तर बेहोस अवस्थामा रहे चक्र । शनिबार राति उनले देहत्याग गरे ।
‘चक्र बाँस्तोलाको दुईटा व्यक्तित्व थियो- कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ । तर, चक्र दाई असफल कूटनीतिज्ञ हो । कूटनीतिक स्वभाव पटक्कै थिएन । जे पनि ठाडै भन्ने, प्रष्ट भन्ने, घुमाएर केही नभन्ने, मनमा एउटा मुखमा अर्काे कुरा नगर्ने स्वभाव थियो’- नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा चक्र बाँस्तोलालाई वर्षाैंदेखि निकटबाट चिनेका विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन् ।
यी उनै चक्र बाँस्तोला हुन् जसलाई वीपी कोइरालाले अत्यन्तै भरोसा गरेका थिए । गिरिजाप्रसादले पनि उनलाई त्यति नै भरोसा गर्थे ।
‘नेपाली कांग्रेसका थिंक ट्याङक हुनुहुन्थ्यो चक्र दाई’ विश्वप्रकाश भन्छन् । २०४४ सालको एक दिन सम्झँदै विश्वप्रकाश भन्छन्- ‘म नेविसंघ मेची क्याम्पस युनिट सभापति थिएँ । गिरिजाबाबुलाई भेट्न हामी बिराटनगर गएका थियौं । गिरिजाबाबुले केही सल्लाह लिन पर्यो भने यति टाढा नआउनु, त्यहिँ चक्र बाँस्तोला छन्, उनैसँग सल्लाह गर्नु भन्नुभएको थियो ।’
‘चुनाव लड्दा पनि मतदाता रिसाउँछन् कि भनेर ध्यान नदिने, प्रष्ट र सत्य बोल्ने चक्र दाइको स्वभाव थियो’ विश्वप्रकाश भन्छन् ।
चक्र बाँस्तोलालाई सम्झँदा उनको विवाह प्रसंग सम्झनै पर्ने हुन्छ । चक्रको ६ वर्षे बेहोस अवस्थामा उनलाई निरन्तर स्याहार सुसार गर्ने काम गरिन् पत्नी कुसुमले । बेहोस पतिको स्याहारसुसारमा कुसुमको समर्पणलाई धेरैले तपस्या नै भन्ने गरेका छन् ।
चक्र र कुसुमको विवाहका सूत्रधार थिए कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद सिटौला । कुसुमको माइती भारतको आसाम थियो ।
त्यसबेला कुसुमका मामा प्रमोदचन्द्र शर्मा झापाको भद्रपुर हाइस्कूलमा शिक्षक थिए । २०४३ असारको एक दिन प्रमोदचन्द्रले सिटौलालाई सोधे, ‘चक्र बाँस्तोला कस्ता मानिस हुन् ?’
सिटौला र बाँस्तोला दुवैजना कांग्रेस थिए, पार्टी प्रतिवन्धित थियो । सिटौलाले चक्रका बारेमा सोध्नुको कारण सोधे । प्रमोदचन्द्रले चक्रसँग आफ्नी भान्जीको विवाहको कुरा चलेको सुनाए । जवाफमा कृष्ण सिटौलाले आफ्नो परिवारमा बिहे गर्ने उमेरका छोरीचेली छैनन्, थिए भने चक्रसँग बिहे गरिदिन्थें भने ।
त्यसपछि प्रमोदचन्द्र चक्रलाई लिएर भारतको आसाम गए । आसामको नेपाली गाउँ तेजपुर पुगे । असारको १३ मा उनीहरुको विवाह भयो । असार १४ मा कुसुमलाई लिएर चक्र र प्रमोदचन्द्र नेपाल फर्किए । प्रतिवन्धित पार्टीका नेता चक्र रातोदिन राजनीतिमा कुदिरहन्थे, कुसुमका लागि नौलो भयो जीवन । चक्र कतिबेला जेल पर्छन् भन्ने टुंगो थिएन ।
०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि चक्र भारतका लागि राजदूत बने, त्यसपछि मन्त्री बने । अनि, एकदिन कहिल्यै नउठ्ने गरी ढले । कुसुमको जीवनमा कालरात्री आयो, निरन्तर पतिको सेवामा तल्लिन भइन् । र, कुसुमको तपस्या विपरितको रात पनि आयो । त्यो रात हो शनिवार २७ असोज, २०७५ । चक्रले देहत्याग गरे । कुसुमको अन्धकार जीवन झन अन्धकार बनेको छ ।
खुमलटार स्थित चक्रको घर नै अस्पताल जस्तो थियो । घरको भुईंतल्लाको विशाल कोठामा चक्रलाई राखिएको थियो । विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण थिए । ठूलो लामो व्हील चेयर थियो । हरेक साँझ बिहान चक्रको फिजियो थेरापी हुन्थ्यो । स्याहार सुसारका लागि नर्स पनि राखिएको थियो ।
चक्रको छातीमा एउटा उपकरण राखिएको थियो जसको नाम हो टाइटास्कोमी । हरेक चार दिनमा फेर्नुपथर््यो । पहिले टाइटास्कोमी विदेशबाट मगाउनुपथर््यो, पछि नेपालमै उपलव्ध हुन थालेको थियो ।
हाम्रो कथा डटकममा केही महिना अघि कुसुमको यस्तो सपना उदृत गरिएको थियो-‘म विकट पहाडमा पुगेकी हुन्छु, बाटो भुल्छु, अँध्यारो हुन थाल्छ, मलाई डर लाग्छ, कता जाने, के गर्ने, कहाँ पुग्ने केही थाहा हुँदैन । आपतमा पर्छु । त्यस्तो बेला उहाँ परबाट हाँस्दै आउनुहुन्छ र मलाई हात समाएर लैजानुहुन्छ ।’
सपनाको वर्णन गरिसकेर आँखा पुस्छिन् र भन्छिन्, ‘कहिलेकाहिँ अशुभ सपना पनि देख्छु । अनि उहाँ हाँसेको, खेलेको, जिस्किएको सपना पनि देख्छु । घुम्न गएको, रमाइलो गरेको सपना देख्छु । मीठोमीठो सपना धेरै देख्छु ।’
चक्र बाँस्तोला प्रखर चिन्तक थिए । उनको स्वभाव खरो थियो । राजनीतिकर्मीमा हुनुपर्ने स्वभाव थिएन । छलछाम जान्दैनथे । जे पनि ठाडै भन्थे । कोही रिसाला कि भनेर सत्य बोल्नबाट पछि हट्दैनथे । ढाँटछल गर्न जान्दैनथे । उनको यो स्वभावबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला असाध्यै प्रभावित थिए ।
कांग्रेसका अग्रज नेताहरु भन्छन्- साह्रै समस्या परेपछि गिरिजाप्रसादले चक्रलाई सम्झन्थे ।
कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा गिरिजाप्रसादको विपक्षमा पुगेका थिए चक्र । विपक्षी खेमामा पुगे पनि चक्रलाई बोलाएर सल्लाह लिइरहन्थे गिरिजाप्रसाद ।
माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ भनेर कांग्रेसमा वकालत गर्ने र गिरिजाप्रसादलाई कन्भिन्स गर्ने चक्र नै थिए ।
यस्ता चक्रले देशको उथलपुथल राजनीतिक वातावरणको ६ वर्ष बेहोसीमा बिताउनुपर्यो । र, बेहोसीमै उनले महाप्रस्थान गरेका छन् ।
हामी सरल पत्रिका परिवार दिवंगत नेता चक्र बाँस्तोलाप्रति हार्दिक श्रध्दाञ्जली अर्पण गर्दछौं ! शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना !
२०७५ असोज २८ आइतबार १२:५४:०० मा प्रकाशित